DC 3 DHAQAN
DC 3 DHAQAN Bilood 6 2 todobaad ka hor #1580
Anigoo ah duuliye waqti sax ah muddo 42 sano ah waxaan u muuqdaa inaan qiimeeyo dhammaan diyaaradaha duulimaadka ah, gaar ahaan kuwa ay tahay inuu ku iibsado isha muhiimka ah. Qaarkood waa quruxsan yihiin qaarna waa inaan la bilaabin.
Kobcinta DC 3 si kastaba ha noqotee waa illaa iyo hadda inta ugu badan macquul ah dhamaan DC 3-yadii duullimaadyada waan duullanay - min matoorku haku dhaqaaqo nidaamyada ie hoolalka caruurnimmada iwm Si kastaba ha noqotee waa hal aag oo canaan laga muujiyo waana tan "baaba'day" baalasheeda markay taagan tahay. A Dak wuxuu leeyahay a jajab togan garabka ("kor u foorari") oo aan dabacsanayn sida diyaaradaha duugga ah oo dhan - waxay ku taagan tahay isla booskeeda haadda haadda ama meel taagan iyadoo laga soo horjeedo diyaaradda rakaabka casriga ah halkaas oo baalasheedu ay isku rogmanayaan oo hoos u socdaan.
Way fiicnaan lahayd in la hagaajiyo oo la mahadiyo inta ka hartay dayuuradahan quruxda badan.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.193